Uphononongo lweNanodrone Vcam HD -I-Drone yangaphakathi | Iindaba zeGajethi
Uphononongo lweNanodrone Vcam HD
Namhlanje sikuzisa uphononongo lwenye iidrones zangaphakathi eyona nto sayithanda kakhulu. Igama lakhe ngu INanodrone Vcam HD Kwaye njengoko unokucinga, yidrone encinci (ingena entendeni yesandla sakho) esiza sixhotyiswe ngekhamera enamandla ye-HD ekuvumela ukuba uthathe iifoto kunye nevidiyo kumgangatho we-HD. Ixabiso layo yi- $ 89,90 y ungayithenga apha.
1 Iifoto ezisemgangathweni kunye neevidiyo
2 Ulawulo olunomdla kakhulu
3 Uyilo kunye nezixhobo
4 Gcwalisa isikhululo
5 Ividiyo yeNanodrone Vcam HD
6 Thenga i-nanodrone Vcam HD
7 Imixholo yebhokisi
10 Igalari yeDrone Photo
Iifoto ezisemgangathweni kunye neevidiyo
Enkosi kuwe inamandla kwaye ayisindi 1080 x 720 camera, I-nanodrone iyakwazi ukurekhoda iividiyo kwaye ithathe iifoto ngomgangatho ongaphezulu kwamkelekileyo kwaye ngaphandle kokohlwaya kakhulu ngokobunzima. Ukusetyenziswa kwayo kulula kunokuba kuninzi lweedrones kweli candelo, kuba iremote iza namaqhosha amabini okuthatha iifoto kunye nevidiyo Ngaphandle kokwenza uhambiso oluntsokothileyo ngesandla.
Ulawulo olunomdla kakhulu
Ngaphandle kwamathandabuzo yenye yeefayile ze- amandla ale drone. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye siyabulela kuyo Amanqanaba ama-4 obunzima iba yidrone emnandi kubo bobabini abasebenzisi batsha kunye nabo baziingcali. Ngeyona ndlela isisiseko i-drone ihamba kancinci, ukuze abo bantu bangakhange basebenzise i-drone banokuziva bekhululekile ukufunda ukusetyenziswa kwayo ngaphandle komngcipheko wokuyaphula, kodwa uya kufunda ngokukhawuleza ukuba isebenza njani kwaye uya kuhamba ukwenza iminwe ukuze unyuke uye kumanqanaba aphezulu ngakumbi apho unokufumana khona ubuchule bokwenyani bale drone kunye nokukwazi kwayo yenza i-stunts kunye ne-360-degree spin spin.
Ikwanayo imowudi yendiza epheleleyo yolawulo. Ngale ndlela uya kuba nakho ukuphatha idrone kwaye uyenze ukuba iye phambili, ngasemva, ngasekunene okanye ngasekhohlo nokuba idrone ijonge phambili okanye ngasemva, ngaloo ndlela uthintela ingxaki eqhelekileyo yabaqalayo xa kuziwa ekulawuleni idrone xa ibekwe ngaphambili.kuzo.
Nangona kunjalo yenzelwe ukuba iphathwe ngaphakathiI-nanodrone Vcam HD iyakwazi ukubhabha ngaphandle kwimeko zomoya eziphantsi. Ungazami ukuyivuthela emoyeni kuba ngenxa yobunzima bayo obuphantsi iya kuba yinto engalawulekiyo kwaye umngcipheko wokuphazamiseka uya kuba phezulu.
Uyilo lwe-drone luhle kwaye Ndisandula ukufumana izinto ezisemgangathweni. Iza nokuxhotyiswa ngezibane ezisivumela ukuba sibhabhe idrone ebusuku kwaye sazi ngawo onke amaxesha ngaphambili nangasemva kwesixhobo.
Inamandla kakhulu ngokuchasene nemothuko kunye nayo isakhiwo sokukhusela ikuvumela ukuba ungqubeke kuyo nayiphi na into ngaphandle kokophula iincakuba.
Isilawuli seNanodrone esineefoto kunye namaqhosha evidiyo
Umthumeli wenanodrone Vcam HD ugqibelele ukusukela inomboniso omncinci apho sinokubona ezona paramitha zisisiseko:
iqondo lobunzima bokuhamba ngenqwelomoya (0%, 50%, 75% okanye 100%)
amandla asetyenziswa kwiziphepheleli
izibane kwi / off off
Ngaphandle koko inalo lonke ulawulo lomthumeli osemgangathweni kolu luhlu lweedrones (iinqwelo zokubhabha, ukucima kunye nokuqhubeka, ukunciphisa, njl.
Ividiyo yeNanodrone Vcam HD
Nantsi ividiyo ye-nanodrone esebenza ngokupheleleyo. Kuyo unokubona ukuba kulula ukuyisebenzisa, i-agile kunye ne-drone emnandi.
Thenga i-nanodrone Vcam HD
Ixabiso le-drone yi- $ 89,90 kwaye ungayithenga kamnandi ngale linki.
Imixholo yebhokisi ye-nanodrone imi ngolu hlobo lulandelayo:
I-Nanodrone VCAM HD ngekhamera edityanisiweyo
2,4 Umthumeli we-Ghz
Ibhetri ye-Li-po enokutshaja kwakhona
Iseti yePropelen yokutshintsha
INanodrone Vcam HD
Imowudi yolawulo olungenasiphelo
Isitishi esinomboniso wolwazi
Abanye abaxhasi abaphinda baphoswa
Igalari yeDrone Photo
Kule galari uza kubona zonke iinkcukacha zale drone intle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uphononongo lweNanodrone Vcam HD
Uyifaka njani utyikityo kwii-imeyile zakho
Iinkonzo ezi-5 zokugcina zonke iifoto zakho efini ngokukhuselekileyo